नेदरका आइमाईहरू: सेनेगालीहरू दासत्वको प्रतिरोध - AFRIKHEPRI
नेडरका महिलाहरू: समानुपातिक सेनेगलिस दासत्वमा
Vयो विशेष गरी दुःखलाग्दो तथ्य हो जुन सेनेगालीहरूले धेरै पहिलेदेखि सम्झेका थिए। नेदरका आइमाईहरूको कथा जसले नोभेम्बर १ 1819 १। १aम a्गलबारमा मोरीश दासहरूको हातमा नपरोस् भनेर सामूहिक रूपमा आफूलाई बलि दिए।
सलाम गर्न प्रतिरोधको एक सुन्दर कार्य, त्यसैले यी महिलाहरूको बहादुरी कहिल्यै मोलमेलमा पर्दैन ...
अफ्रिकी क्यान्सर र कालो डासासका हेराइन
त्यस समयमा, भोलो सेनेगल नदीको मुखमा स्थित एक समृद्ध प्रान्त थियो। यो बासिन्दाहरू, शान्त किसानहरू, लेन-सहारन व्यापारका कारवाहीहरू र सेन्ट लुइस, सेनेगलको पहिलो औपनिवेशिक राजधानीका साथ व्यापारमा बस्छन्, जहाँ तिनीहरूले आफ्नो कृषि उत्पादन बेचे। नदीले मॉरिटानियाबाट भोलोलाई अलग पारेको थियो, जहाँ ट्रारजसको जनजाति स्थापित भयो। तिनीहरूबाट, कसैले पहिल्यै जान्थ्यो कि चाहे ग्राहकहरू सामान वा शत्रुहरूलाई कैदमा भर्ती गर्न को लागी ग्राहकहरु को रूप मा जग्गा कि भनेर। वैसे पनि, सेन्ट लुइसमा फ्रांसीसी सैनिकहरूको स्थापना पछि, मोर्सले वोलो विरुद्ध आफ्नो दबाब बढाए, जसलाई उनीहरूले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्थे, यस क्षेत्रलाई अवरोध अन्तर्गत पराजित गर्न को लागी युरोपेली।
त्यस वर्ष, शांतको एक लामो अवधिमा हिंसात्मक संघर्ष पछि मोोरिश योद्धाहरू र उनीहरूको टेककुलर्स सहयोगीहरू एकदमै सफल भए। यो सुत्ने मौसममा चाँडै थियो र नेडर थोडा चिसो थियो। ब्रेक (राजा) स्यान लुइसमा रहेको थियो, नटगागरको युद्धको समयमा खराब चोटको उपचार गर्न ठीक थियो। सामान्यतया, राज्यका गणतान्त्रिकहरू यात्रा गरिरहेका थिए र अलौकिकको एक राम्रो भाग उनीसँग थिए।
मंगलवार कुनै पनि अन्य दिन जस्तै मानिसहरू सुरुतिर, को काँध मा Daba (परम्परागत Hoe) मा क्षेत्रहरू आएका थिए। अरूलाई शिकार भएको थियो, तेस्रो समूहले नदीको दिशा लिइसकेको थियो जहाँ उनीहरूको माछा मार्ने डुङ्गाहरू चिसो भएको थियो। मात्र केही ceddos (सैनिकहरू) फौजलाई हराउँछन् मा रहिरहे र आफ्नो nonchalantly प्रमुख व्यापार बन्दुक पलिश व्यस्त थिए। महिलाहरु, बालबालिका र बूढो मानिसहरु लाई राहत दिइएका गाईहरु संग गाँउमा, दैनिक जीवनको एनीमेशन शासन भयो। घाइते, एक कडा दौरमा, बागलुङ पीडित गर्न उनको खारिज महिलाहरु, आफ्नो व्यवसाय को बारे मा जा रहेको छ, रियायत को भित्र एक अर्का भनिन्छ। अन्य अल्पसंख्यकहरू जहाँ व्यस्त हुन्थ्यो र त्यहाँका फसलहरू भण्डारण गरिएका थिए। केही अन्तमा जब युवा बच्चाहरु साँझमा, पुरानो विगतका कथाहरू फैलाउनु गर्न अभ्यस्त थिए जहाँ palaver रूख वरिपरि ठूलो स्वरमा जारी, गाउँमा वर्ग मा चुपचाप chatted।
अचानक एक रोए आतंकले ठाउँ को शांति को खतरा बनायो। एक तुरुन्तै, हँसी झन्झट भयो, पिडाहरू खसेको थियो, रमाइलोले खाली गर्यो। सबै आँसुले महिलालाई इमान्दार गरेकी थिइन् जसले टाटाको प्रवेश द्वारमा घुम्न थालेको थियो, बाहिरी शाखाहरु र माछाको पर्खाल, आक्रामक मामला मा गाँउहरु को रक्षा गर्न को लागी।
हातले पानीको साथमा एक क्यालोबाश निकालेर हात समातेर यद्यपि यसको सामग्री खाली गरिसकेको छ, महिलाले गाँसिएको छ, "डरलाग्दो! मोर्सहरू यहाँ छन्! उनीहरू आइपुगे! म गियरियर्स झीलको किनारमा थिएँ र उनीहरूलाई रेडमार्फत हेरे। मोर्सको सेना! उनीहरूको साथ उनको साथमा अमर ओलल्ल Mokhtar नेतृत्वको Toucouleurs को एक सेना! तिनीहरू नदी पार गरेर हाम्रो गाउँमा आउछन्! "
सबै महिलाहरू एउटै समयमा चिच्याए। उनीहरूले कस्तो भविष्यलाई भेट्टाए कि उनी ... मोर्सले देशभरको बीचमा भण्डार गर्न मोलोमा आफ्नो आक्रमण सुरु गरे। धेरै अफ्रिका, महिला र छोराछोरीहरू उत्तरी अफ्रिकाका दासहरूलाई धनी परिवारमा बेच्नका लागि तिनीहरूका परिवारबाट भागेका छन्। यो सधैं यो तरिका थियो र नेडरले धेरै छोरा र छोरीहरू गुमाएका थिए।
बीचमा, केहि माइल दूर, नदीको अर्को छेउमा पोस्ट गरियो, रेगिस्तानबाट घोडाहरू घुम्न थालेका थिए घोडाहरू आक्रमण गर्न तयार गर्न। महिलाहरूले तुरुन्तै बाँकी सैनिकों संग प्रतिरोध को व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरे।
चाँडोमा, तिनीहरूले बच्चाहरूलाई वरिपरिका खेतहरूमा आफ्ना एल्डरहरूको डोऱ्याइमा ल्याए, बागलुङको अग्लो ढोकामा लुकाउन। त्यसपछि तिनीहरू ब्वाँसो र बगेको प्यान्टमा लुगा लगाउन आउन थालेका थिए, जसको पति, एक बुबा, भाइको भाइ; पुरुषको टोपी अन्तर्गत लुकेको लुगा। तिनीहरू सबैका लागि उनीहरूको रक्षाको लागि प्रयोग हुन सक्थे: काटन-कटरहरू, भालाहरू, क्लबहरू र वास्तविक राइफलहरू जुन तिनीहरू पहिलो पटक संभालिरहेका थिए।
एक दिनको लागि अमेजनहरू, यी महिलाहरूलाई निराशाको ऊर्जाले लडाईयो। शत्रुहरू, किसानहरू, अस्तव्यक्तिहरू, जवान, बूढो, तिनीहरू व्यस्त थिए, उनीहरूको मात्र साहसद्वारा एनिमेटेड, दुश्मनसँगको भयानक आक्रमणमा। यी असाधारण महिलाहरूको स्मृतिमा उत्सवको गीतहरूमा अफ्रिकाको इतिहासका चित्रकारहरू, ग्रिट्सहरू, त्यस दिनसम्म उनीहरूले तीन सय भन्दा बढी मोराहरूलाई मारे। तथापि, युद्ध, असमान थियो। Ceddos चाँडै हटाइयो। खरगोश रगतको स्क्वायरहरू गहिरो फ्लोरमा रातो मिडमा फैलियो। यहाँ र त्यहाँ पिell-mell कोर्न्सहरू राख्छन् र घाइते भएका छन्।
बिरुवाहरूको भयंकर दृष्टान्तको सामना गर्ने, यद्यपि बेपत्ता भएका व्यक्तिहरू दुश्मन स्तम्भमा संख्यामा उत्कृष्ट थिए, नेता अमर ओलल्ल Mokhtar आफ्नो सेना को फैलावट को क्रम मा शुरू गर्यो। रेगिस्तानका सवारहरूले आफ्ना पतला तलवारहरू लगाए, ती घाइतेहरू आफ्नो हड्डीमा लिइन् र फेरि झील पार गरे। साधारण महिलाहरु द्वारा चेक मा रहन को लागी, मोरीश नेता को थाहा थियो कि उनि उनको बहादुरी को बावजूद लंबा को प्रतिरोध नहीं गरेर सके। "वस्तु" हानिकारक जोखिम गर्न चाहँदैनन्, उनीहरूले केही पछि पछि फर्केनन्, उनीहरूलाई दास बजारमा राम्रो मूल्य प्राप्त गर्न जिउँदो लिने योजना बनाइयो।
वाल्को महिलाहरूले हराएको महसुस गरे ... उनीहरूका बलको अन्त्यमा उनीहरूले दोस्रो आक्रमणको सामना गर्न सक्दैनन्। मानिसहरू सबै खराब र दूत जो मदत खोज्न पुगेका थिए, निश्चित रूपमा धेरै ढिलो आइपुगे। सबै आशा बेकार थियो।
Nder को महिलाहरु! उत्तम वालो लडकियों! आफ्नो लूटकुमारीहरू सिध्याउनुहोस् र पुन: नवीकरण गर्नुहोस्!
त्यसो भए कि एक आवाज क्लैमर, विलापहरु र howls दुखाइ भन्दा माथि उठ्यो। यो मर्काया दिया, किक (रानी) फटीडी यममको ठुलो थियो। उनी एक्लै जान्थे कि रानी घिमिरे जुन ऊर्जा र उदारवादी न्यायाधीशहरूको आज्ञाकारी बनाइन्छ। रूख विरुद्ध समर्थन लिन, किनकि उनी आफै घाइते भएका थिए, तिनले आफ्ना साथीहरूलाई दुर्व्यवहार गर्न थाले:
"नाइडरका महिलाहरू! उत्तम वालो लडकियों! आफ्नो लूटकुमारीहरू सिध्याउनुहोस् र पुन: नवीकरण गर्नुहोस्! मर्न तयार छ! नेडरको पत्नी, हामी सधैँ आक्रमणकारी हुनु अघि पछाडि पर्खनु पर्छ? हाम्रा मानिसहरू धेरै टाढा छन्, तिनीहरूले हाम्रो चिन्ता सुन्न सक्दैनन्। हाम्रा छोराछोरी सुरक्षित छन्। अल्लाह सर्वशक्तिमान कसरी उनीहरूको संरक्षण गर्न जान्नेछन्। तर हामी, गरिब स्त्रीहरू, हामी ती ती कुकुर दुश्मनहरूको विरुद्धमा के गर्न सक्छौं जसले चाँडै आक्रमण फेरि सुरु गर्नेछ? "
"हामी पत्ता लगाउन सकेनौं जहाँ हामी खोज्न सक्छौं? हामी पहिले हाम्रो आमा र दादीको रूपमा पकड गरिनेछ। हामी नदीमा तानिएको र दासको रूपमा बेच्ने छौँ। के यो भाग्यको योग्य छ? "
आँसु रोकेको छ, उजुरी अधिक ढिलो भयो ... "उत्तर! तर त्यहाँ मोहनको लागि बसिरहनुको जवाफ! तपाईका रिटहरूमा तपाई के छ? रक्त वा मार्गी पानी? के तपाईं आफ्ना पोर्चुगल र उनीहरूको सन्तानको बारेमा पछि भन्न चाहानुहुन्छ: के तपाईंका दादीहरूले गाँउको कैदीको रूपमा छोडेनन्? अथवा: तपाईंको दादी मृत्युसम्म बहादुर हुनुहुन्थ्यो! "
मृत्यु! यस शब्दमा एक बेहोश विस्मयापण सुनेको थियो। "मृत्यु! तपाईले भन्सार दिन भन्नुहुन्छ? "हो, मेरा बहिनीहरू। हामी स्वतन्त्र महिलाहरूको रूपमा मर्नुपर्छ, दासको रूपमा बाँच्न हुँदैन। जो म सहमत छु म संधै परिषद को ठूलो बक्स मा। हामी सबै भित्र प्रवेश गर्नेछौं र हामी यसलाई आगोमा राख्नेछौं ... यो हाम्रो जडीबुटीको धुलो हो जसले हाम्रो शत्रुहरूलाई स्वागत गर्नेछ। मेरो बहिनीहरू उठाउनुहोस्! किनकि कुनै अन्य तरिका बाहिर छैन, गरौं वाल्लोको योग्य महिलाहरूमा! "...
सूर्य अब आकाशमा उच्च थियो। एक चाप बढ्दो गाँउमा गिर्यो। निराशामा म्यूट, महिलाहरू गाढाको बीचमा विशाल, अभिनय वर्ग तिर ढिलो हुँदै गयो। आफ्नो कायरता को गुन्जन आफ्नो सन्तानलाई मा भन्दा फैल भनेर डर लागि Mbarka व्यास, विरोध गर्न कुनै एक dared। अन्तिम पटक तिनीहरूले आफ्नो दैनिक को परिचित सेरोफेरो अवलोकन आफ्नो आँखा panicked कुखुरा, लुटेका granaries, भुइँमा छोडेर drumsticks मा आँसु भरिएको वरिपरि झूट, बर्तन पल्टाइदिनुभयो बायाँ, बक्से gutted र corpses नजिक ती सबै थाले गर्मी को प्रभाव को तल बदलन को लागि ...
त्यसपछि तिनीहरू मुख्य वर्गमा पार्यो। केही जवान आमाहरू जुन नवजात शिशुहरूबाट छुट्याउन चाहँदैनन्, उनीहरूलाई हल्लाउन, तिनीहरूका छातीहरू विरुद्ध थिचिएको थियो। कक्ष प्रवेश गर्न अन्तिम गर्भवती थियो र समाप्तिको नजिक। मार्केरियाले ढोका बन्द गरे। विशिष्ट इशारा मा, त्यो एक टर्च ignited र कामेको बिना शाखा को FACADES एक विरुद्ध फाले। तुरुन्तै विशाल अग्लो आगो। बक्समा भित्र, महिला entwined विरुद्ध, प्रत्येक अन्य, clenched साहस, लोरी र पुरानो refrains को अन्तिम फट दिन भने बाल्यकाल आफ्नो गतिविधिहरु punctuated थियो देखि, गाए।
गीतहरू गल्ती गर्न थाले ... तुरुन्तै खाँसीको हिंसक पक्षले प्रतिस्थापित गर्यो। त्यसपछि आफ्नो अस्तित्व अन्त द्वारा निर्देशित आमा, हिंसापुर्वक ढोका एक लात, हावा को एक सास snatching, धक्का र जब त्यो माटो मा fainted बाहिर हतारिएको । जो अझै जीवित थिए ती कदमहरू थिएनन्। तिनीहरूमध्ये केही दुर्व्यवहार गर्ने समय थियो: "उनीहरूलाई एक्लै छोडिदिनुहोस्। त्यो हाम्रो कथा बताउनेछ र हाम्रो छोराछोरीलाई भन्नुहुन्छ जसले भविष्यका लागि आफ्ना छोराहरूलाई बताउनेछ। "अझै asphyxiated छैन जो थियो गरिएको ती आफ्नो आवेदन गीतहरू मा हेर्न जारी, यो चमक लाश राख्ने बाकस मा रहन साहस। र आवाज टाढा छ ... अचानक, एक डरलाग्दो संकट आगो को भंग गर्न मा गुमायो। छत ढाँचा निकायमा थियौं। यो एक मृत्युको मौन थियो जसले गाँउलाई मद्दत गर्न धेरै ढिलो आइपुगेका मानिसहरूलाई अभिवादन गरे। नेदरको सबै महिलाहरू ध्वस्त भए। बाहेक एक।
प्राचीनहरू भन्छन् कि त्यस क्षणमा, ठूला कालो बादलहरू आकाशमा घुमाउँथे र सबै कुरा अस्पष्ट भए। यदि यी बुबाको शोक लुकेको छ भने, यी पुत्रहरू र तिनीहरूका पतिहरू निराशाले घृणा गर्छन, न त तिनीहरूको चिन्ता न त तिनीहरूको आँसु र न पनि समय निवेदन गर्न सक्छ। त्यस दिन र धेरै लामो समयको लागि, "टाटा नर्ड" नामक एक संस्कार नेर्डको गाँउमा यी नायिकाहरु को स्मृति को सम्मान को लागी स्थापित गरिएको थियो। हरेक वर्ष, मङ्गलबार नोभेम्बरमा, स्मरणको दिनमा यो समस्याको लागी कुनै गतिविधि थिएन। अनि लामो समयसम्म पुरुष र महिला, जवान र बूढो, आफ्नो रौतहट भित्र बन्द रह्यो र निडरकी पत्नीहरूको बलिदानको लागि श्रृङ्खला दिनुहोस्।
आज, मैले भनें, मेमोरीको रूपमा यो छोटो गाँउ वाल्व को त्याग र प्रकृति को मेटाइन्छ। इतिहासमा लेखिएको सम्झनाको लागि त्यहाँ कुनै स्मारक छैन। नर्डको हाम्रो योग्य पुर्खाहरूले हामीलाई बेवास्ता गरेको यो सुन्दर पाठको भित्ता पछि अनौपचारिक भन्दा बढी योग्य हुनुहुन्न?
मुहान: अफ्रिकी रानी ब्ल्याक डायस्पर्सिया सिल्भिया सर्बिनको हेराइन।
विद्यार्थीहरूलाई - जिद्दु कृष्णमूर्ति (अडियो)